पाकिस्तानमाथि कीर्तिमानी जित हासिल गरेका अंग्रेज कप्तान मोर्गनमाथि किन लाग्यो प्रतिबन्ध?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पाकिस्तानमाथि कीर्तिमानी जित हासिल गरेका अंग्रेज कप्तान मोर्गनमाथि किन लाग्यो प्रतिबन्ध?
एजेन्सी । इंग्ल्यान्डका क्रिकेट कप्तान इयान मोर्गनलाई एक खेलको प्रतिबन्ध लागेको छ ।
पाकिस्तानविरुद्ध बिहीबार भएको खेलमा स्लो ओभर रेटको कारण मोर्गनलाई एक खेलको प्रतिबन्ध लागेको हो । उक्त खेलमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई ६ विकेटले हराएको थियो ।
प्रतिबन्धसंगै मोर्गनले पाकिस्तानविरुद्ध शुक्रबार हुने चौंथो एकदिवसिय खेल गुमाउने छन् । यस्तै उनलाई म्याच फि को ४० प्रतिशत जरिवाना समेत गरिएको छ ।
मोर्गनमाथि मात्र होइन, इंग्याल्ण्डको कीर्तिमानी जितमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएका जोनी बेयरस्टोमाथि पनि आईसीसीले कारबाही गरेको छ ।
३५९ रनको लक्ष्य पछ्याएको अंग्रेज टिमका लागि बेयरस्टोले १२८ रन बनाए टिमलाई जित नजिक पुर्याएका थिए । तर, जनैद खानको बलमा बोल्ड भएपछि रिसाएका उनले स्टम्पमा ब्याटले प्रहार गरेपछि आईसीसीले कारबाही गरेको हो । उनीमाथि एक डिमेरिट अंक थपिएको छ ।
बिहीबार इंग्याल्याण्डले ३५९ रनको लक्ष्य ४४ ओभरमै पूरा गरेर कीर्तिमानी जित हात पारेको थियो । उसको जितमा जेसन रोय र बेयरस्टोले तुफानी ब्याटिंग गरेका थिए । मोइन अलीले पनि निर्धारित ओभरभन्दा पहिला नै जित दिलाउन तुफानी ब्याटिंग गरेका थिए ।
पाकिस्तानविरुद्धको पाँच खेलको सिरिजमा इंग्ल्यान्ड २-० ले अघि रहेको छ ।